ကိုရီးယား bbq ဘူဖေး ကို ပရိုကျကျစားတတ်ဖို့ -
ကိုရီးယား bbq ဘူဖေး ကို ပရိုကျကျစားတတ်ဖို့
Posted on February 11, 2019 February 11, 2019 Author Stella	Comment(0)
အစားတစ်လိုင်း ယောင်းတို့ မဖြစ်မနေ သိထားသင့်သောပါနော်…
ယောင်းတို့ ကိုရီးယားကားတွေ ကြည့်ရင် ရုပ်ရှင်ထဲမှာ အသားပြားကြီးတွေကို မီးဖိုပေါ်မှာ တရှဲရှဲကင်ပြီး ဆလပ်ရွက်လေးနဲ့ ထုပ်စားလိုက် ဆိုဂျူးလေးသောက်လိုက်နဲ့ သွားရည်ကျဖူး အဲလေ မြင်ဖူးတယ်ဟုတ်? ကိုရီးယား bbq ဆိုင် အတော်များများက all-you-can-eat ဆိုတဲ့ အဝစားဘူဖေးစနစ်တွေ များပါတယ်။ ဆိုတော့ ပိုက်ဆံပေးရတာနဲ့ တန်အောင် များများစားနိုင်ဖို့က ယောင်းတို့ တာဝန်ပါ။ ဒီတစ်ခါတော့ အဲဒီကိုရီးယားအကင်တွေကို များများစားစားနဲ့ ပရိုကျကျ ဘယ်လိုစားရမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးမယ်နော်။
(၁) အရံဟင်းတွေကို မေ့ထားလိုက်ပါ။
ဘူဖေးဆိုတဲ့အတိုင်း ထမင်းကြော် ခေါက်ဆွဲကြော် ဘာကြော်ညာကြော်စတဲ့ အရံဟင်းတွေကလည်း အများသားလေနော်…ကိုရီးယား အကင် အဝဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီအရံဟင်းတွေကို ယောင်လို့တောင် မထိပါနဲ့ ယောင်းရေ။ ကိုယ့်ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်က အသားများများ စားနိုင်ဖို့လေနော်။ ထမင်းကြော် ခေါက်ဆွဲကြော်တွေကို စားမိရင် မြန်မြန်ဗိုက်ပြည့်နိုင်တာမို့ အကင်ကို မှန်းထားသလောက် စားနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။
ကိုရီးယားbbqတွေ စားပြီဆိုရင် အဓိကစားရမယ့် အသားကတော့ အမဲသားပါ။ အမဲလျှာ နို့အုံသား နဲ့ နံရိုးသားစတာတွေကို ရွေးစားသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ယောင်းဟာ အမဲသားရှောင်သူဆိုရင်တော့ ဝက်သားနဲ့ ပုစွန်စတာတွေကို အစားထိုးနိုင်ပါတယ်နော်…
Related article >>> ကဏန်းခွက်ကြော် အိမ်မှာကြော်စားမယ်
(၃) အသားတွေကို အကြာကြီး မကင်ပါနဲ့
အသားတွေကို အကြာကြီးတူးတဲ့အထိ ကင်လိုက်ရင် အနံ့နဲ့တင် ဗိုက်ပြည့်သွားနိုင်တာမို့ အသားကျက်လောက်ပြီဆိုတဲ့ နှစ်မိနစ် သုံးမိနစ်လောက်ထိပဲ ကင်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ ပြီးတော့ အကင်တွေက အရမ်းကြီးကျက်အောင် ကင်လိုက်ရင် စားမကောင်းတော့ဘူးလေ.. မာသွားရော…
Related article >>> ဖြားယောင်းနေသော အစားအသောက်များကို ရှောင်ရှားနည်း
(၄) ဒါလေးတွေနဲ့ တွဲစားပါ။
အသားချည်းပဲစားရတာ ငြီးငွေ့လာရင် ကင်မ်ချီ ဆလပ်ရွက် စတာတွေနဲ့ တွဲစားပါ။ ကင်မ်ချီရဲ့ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်အရသာက အအီပြေနိုင်သလို ဆလပ်ရွက်နဲ့ ထုပ်စားတာကလည်း ရင်ချောင်ပြီး ခံတွင်းရှင်းစေတာမို့ ပိုစားနိုင်စေပါတယ်နော်။
(၅) ဂက်စ်ပါတဲ့ အချိုရည်တွေ မသောက်ပါနဲ့။
ဂက်စ်ပါတဲ့ အချိုရည်တွေက ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒီအစား မသောက်မဖြစ် သောက်ရမယ်ဆို ရေပဲသောက်ပါ ယောင်းရေ…
Stella ကိုယ်တိုင်က ကိုရီးယားအကင်တွေစားရင် စားချင်ပေမဲ့ ထင်သလောက် ဘယ်တော့မှ မစားနိုင်ဘဲ မတန်သလို ခံစားရတဲ့သူပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တတ်သလောက် မှတ်သလောက်နဲ့ အပေါ်က နည်းတွေအတိုင်း စားကြည့်တော့ တန်တဲ့အပြင် ဟိုဘက်ကမ်းတောင် လွန်သွားသေးတယ်။ ယောင်းတို့လည်း Stella လိုမျိုး ပေးရတာနဲ့ တန်အောင် များများစားချင်ရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းတွေကို သုံးကြပါလို့… အဆင်အပြေလွန်ပြီး ဆိုင်က လက်မခံတော့ရင်တော့ မတတ်နိုင်ပါဝူးရှန် 😛
အစားတဈလိုငျး ယောငျးတို့ မဖွဈမနေ သိထားသငျ့သောပါနျော…
ယောငျးတို့ ကိုရီးယားကားတှေ ကွညျ့ရငျ ရုပျရှငျထဲမှာ အသားပွားကွီးတှကေို မီးဖိုပျေါမှာ တရှဲရှဲကငျပွီး ဆလပျရှကျလေးနဲ့ ထုပျစားလိုကျ ဆိုဂြူးလေးသောကျလိုကျနဲ့ သှားရညျကဖြူး အဲလေ မွငျဖူးတယျဟုတျ? ကိုရီးယား bbq ဆိုငျ အတျောမြားမြားက all-you-can-eat ဆိုတဲ့ အဝစားဘူဖေးစနဈတှေ မြားပါတယျ။ ဆိုတော့ ပိုကျဆံပေးရတာနဲ့ တနျအောငျ မြားမြားစားနိုငျဖို့က ယောငျးတို့ တာဝနျပါ။ ဒီတဈခါတော့ အဲဒီကိုရီးယားအကငျတှကေို မြားမြားစားစားနဲ့ ပရိုကကြ ဘယျလိုစားရမလဲဆိုတာ ပွောပွပေးမယျနျော။
(၁) အရံဟငျးတှကေို မထေ့ားလိုကျပါ။
ဘူဖေးဆိုတဲ့အတိုငျး ထမငျးကွျော ခေါကျဆှဲကွျော ဘာကွျောညာကွျောစတဲ့ အရံဟငျးတှကေလညျး အမြားသားလနေျော…ကိုရီးယား အကငျ အဝဆှဲမယျဆိုရငျတော့ အဲဒီအရံဟငျးတှကေို ယောငျလို့တောငျ မထိပါနဲ့ ယောငျးရေ။ ကိုယျ့ရဲ့ အဓိကရညျရှယျခကျြက အသားမြားမြား စားနိုငျဖို့လနေျော။ ထမငျးကွျော ခေါကျဆှဲကွျောတှကေို စားမိရငျ မွနျမွနျဗိုကျပွညျ့နိုငျတာမို့ အကငျကို မှနျးထားသလောကျ စားနိုငျတော့မှာ မဟုတျပါဘူးနျော။
ကိုရီးယားbbqတှေ စားပွီဆိုရငျ အဓိကစားရမယျ့ အသားကတော့ အမဲသားပါ။ အမဲလြှာ နို့အုံသား နဲ့ နံရိုးသားစတာတှကေို ရှေးစားသငျ့ပါတယျ။ တကယျလို့ ယောငျးဟာ အမဲသားရှောငျသူဆိုရငျတော့ ဝကျသားနဲ့ ပုစှနျစတာတှကေို အစားထိုးနိုငျပါတယျနျော…
Related article >>> ကဏနျးခှကျကွျော အိမျမှာကွျောစားမယျ
(၃) အသားတှကေို အကွာကွီး မကငျပါနဲ့
အသားတှကေို အကွာကွီးတူးတဲ့အထိ ကငျလိုကျရငျ အနံ့နဲ့တငျ ဗိုကျပွညျ့သှားနိုငျတာမို့ အသားကကျြလောကျပွီဆိုတဲ့ နှဈမိနဈ သုံးမိနဈလောကျထိပဲ ကငျတာ အကောငျးဆုံးပါ။ ပွီးတော့ အကငျတှကေ အရမျးကွီးကကျြအောငျ ကငျလိုကျရငျ စားမကောငျးတော့ဘူးလေ.. မာသှားရော…
Related article >>> ဖွားယောငျးနသေော အစားအသောကျမြားကို ရှောငျရှားနညျး
(၄) ဒါလေးတှနေဲ့ တှဲစားပါ။
အသားခညျြးပဲစားရတာ ငွီးငှလေ့ာရငျ ကငျမျခြီ ဆလပျရှကျ စတာတှနေဲ့ တှဲစားပါ။ ကငျမျခြီရဲ့ ခဉျြခဉျြစပျစပျအရသာက အအီပွနေိုငျသလို ဆလပျရှကျနဲ့ ထုပျစားတာကလညျး ရငျခြောငျပွီး ခံတှငျးရှငျးစတောမို့ ပိုစားနိုငျစပေါတယျနျော။
(၅) ဂကျဈပါတဲ့ အခြိုရညျတှေ မသောကျပါနဲ့။
ဂကျဈပါတဲ့ အခြိုရညျတှကေ ရငျပွညျ့ရငျကယျဖွဈစပေါတယျ။ အဲဒီအစား မသောကျမဖွဈ သောကျရမယျဆို ရပေဲသောကျပါ ယောငျးရေ…
Stella ကိုယျတိုငျက ကိုရီးယားအကငျတှစေားရငျ စားခငျြပမေဲ့ ထငျသလောကျ ဘယျတော့မှ မစားနိုငျဘဲ မတနျသလို ခံစားရတဲ့သူပါ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျတတျသလောကျ မှတျသလောကျနဲ့ အပျေါက နညျးတှအေတိုငျး စားကွညျ့တော့ တနျတဲ့အပွငျ ဟိုဘကျကမျးတောငျ လှနျသှားသေးတယျ။ ယောငျးတို့လညျး Stella လိုမြိုး ပေးရတာနဲ့ တနျအောငျ မြားမြားစားခငျြရငျတော့ ဒီနညျးလမျးတှကေို သုံးကွပါလို့… အဆငျအပွလှေနျပွီး ဆိုငျက လကျမခံတော့ရငျတော့ မတတျနိုငျပါဝူးရှနျ 😛
Tagged Asia Food, BBQ, Food, foodie, foodlover, foodporn, Hacks, Korea, tips
ယောင်းတို့ရေ အိမ်မှာထမင်းပဲစားနေရတာ ပျင်းနေပြီဆိုရင် ဒါလေးလုပ်စားကြည့်နော် လုပ်ရတာလည်း လွယ်တော့ အဆင်ပြေတာပေါ့
Posted on October 26, 2017 October 26, 2017 Author Akari
ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် ရှူးရှဲ အရသာက စားပြီးရင် စားချင်နေမှာနော်…
Knowledge Language Tips
အင်္ဂလိပ်လို Presentation လုပ်ကြတဲ့အခါ ဘယ်လို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမလဲ?
Posted on July 7, 2018 July 25, 2018 Author Myat Moe
မိခင်ဘာသာစကားနဲ့တောင် လုပ်ဖို့မလွယ်တဲ့ presentation ကို အင်္ဂလိပ်လိုလုပ်ဖို့ လွယ်ပါ့မလားဆိုတော့…
ကမ္ဘာ့နာမည်အကြီးဆုံး နံပါတ် (၁) ဘရန်းနေရာကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်တဲ့ Gucci
Valentine’s Day မှာ ဒင်နာဒိတ်တဲ့အခါ အလှဆုံးဖြစ်နေအောင် ဘာတွေ ဝတ်ကြမလဲ?